ICambodia Visa ekwi-Intanethi | ECambodia i-Visa | natvisa.com
ICambodiaVisaOnline.org ngoku natvisa.com! Ukuba unesicelo esikhoyo kwaye ungathanda ulwazi malunga nenqanaba le-visa yakho, nceda wenze isicelo senkxaso. Yaziswa ukuba simise okwethutyana zonke izicelo ze-visa ngenxa yokuthintelwa kokuhamba kwe-COVID-19.
Yenza isicelo senkxaso
Isicelo seCambodia Visa kwi-Intanethi
UMphathiswa Wezangaphandle upapashe i-Visa ye-elektroniki. Oku kuvumela iindwendwe ezivela kumazwe athile ukuba zidlule kwinkqubo esemthethweni yesicelo se-Ambass kwaye zingenise izicelo zazo nge-portal ye-Intanethi. Esi sicelo se-elektroniki siya kuvumela umenzi-sicelo ukuba afumane i-e-visa engakhange ahlangane negosa laseburhulumenteni okanye athumele amanye amaxwebhu. Emva kokufakwa kwesicelo kwi-intanethi kwaye samkelwe, umenzi-sicelo uya kufumana uxwebhu lwe-e-visa nge-imeyile kwiintsuku ezi-4 zomsebenzi. Inkqubo: Iintsuku ezi-4 zomsebenzi.
Iindidi zeCambodia Visa
Abakhenkethi e-Visa Imeyli Iinyanga ze-3 Ukuza kuthi ga kwiintsuku ze-30 enye Faka isicelo ngoku
Imisebenzi kunye nokuphuma eCambodia
Okwangoku, le visa kuphela ungena eCambodia ye Iinjongo zokhenketho kuphela. Lo mgangatho ungatshintshwa kwixesha elizayo ukuvumela iindidi ezingakumbi. Ukuba ufuna i-visa yeshishini okanye naluphi na olunye uhlobo lwe-visa, uyacelwa ukuba undwendwele okanye uqhagamshelane nozakuzaku waseCambodia okufutshane ukuze ufumane eminye imiyalelo.
Nje ukuba utyelelo lwakho eCambodia lufike kwaye luphele, kuyakufuneka uphume ngezibuko eligunyazisiweyo.
Igama lamazibuko aphumayo aphumileyo:
UBavet (USvay Rieng)
I-Cham Yeam (EKoh Kong)
I-Poi Pet (IBanteay Meanchey)
Phnom Penh Isiza sezindiza
Siem Reap Isiza sezindiza
UTropaeng Kreal Umda weposi (iStung Treng)
U-Preah Sihanoukville Isiza sezindiza
Ubunzima (I-Oddar meanchey)
OweSmach (I-Oddar meanchey)
Kaoam Samnor (IKandal Mekong)
Phnom Den (Thatha)
Ukukhangela kwiTrend (EKratie)
UDong Kralo (Stung Treng) usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
e-Visa uXwebhu ngokuPrinta
Nje ukuba ivunyelwe kwaye ihanjiswe nge-imeyile, kubalulekile ukuba ucofe ifayile .pdf kwaye uyiprinte. Oku kunokwenziwa kusetyenziswa umshicileli ekhaya okanye kwivenkile yoshicilelo yendawo yakho. Qinisekisa ukuba uxwebhu lokuprinta lwe-visa lucacile kwaye luyabonakala. Ibhakhowudi kufuneka ibonakale kwaye ikwazi ukuskenwa ligosa lokufudukela kweli xa lifika eCambodiya.
Nge-visa ekwi-intanethi (i-e-visa), uya kuvunyelwa ukuba ungene ngamazibuko asixhenxe (7) okungena. Yakuba ivunyiwe iphepha-mvume lokundwendwela, uya kuba nenketho yokuba ukhethe eyiphi na izibuko oza kuyisebenzisa ukungena eCambodia.
Igama le vunyelwe amachweba okungena nge-eVisa:
Igama le ayivumelekanga amachweba okungena nge-eVisa:
Ukuqinisekiswa kwencwadana yokundwendwela xa ufika eCambodiya
Ukufudukela kwelinye ilizwe kwipaspoti yakho kufuneka isebenze ubuncinci iinyanga ezi-6 ukusuka ukufika kwakho eCambodia. Kubalulekile ukuba incwadana yokundwendwela ibe namaphepha ama-1-2 ubuncinci afumanekayo kwisitampu sokungena.
ECambodia eVisa Inkqubo
Fumana iVisa yaseCambodia
IAngkor Wat yeyona tempile idume kakhulu eCambodia kodwa ayisiyiyo kuphela ekufanele ukutyelelwa. Kubakhenkethi abangathanda ukubona ubuhle baseCambodia kunye namava enkcubeko yabo, kusoloko kuyisiqabu ukufumana ukuba ukuhamba kweli lizwe kuqondile kwaye kulula. Bonke abahambi kufuneka benze ukutyelela eCambodiya ukuze bafake isicelo kwiCambodia eVisa ekwi-Intanethi. Yonke inkqubo inokugqitywa kwi-intanethi kwaye abakhenkethi banokuprinta ii-visa zabo kwiintsuku ezi-4 zokufaka isicelo. Emva koko banokuhamba baye eCambodia kwaye babazi abantu bakhona kunye nenkcubeko.
Uyifumana njani iVisa
Eyona ndlela ilula yokuba iindwendwe zifumane imvume yokungena eCambodia kukuba zifumane ii-visa zabo kwi-Intanethi ngaphambi kokuba zifike kweli lizwe. Oku kuqinisekisa ukungena ngokulula kwaye kwenza ukufuduka kukhawuleze kwaye kusebenze ngakumbi. Nantsi indlela abahambi abanokufaka ngayo isicelo seCambodia eVisa.
Gcwalisa isicelo se-visa se-intanethi. Urhulumente waseCambodian unesicelo sabo se-visa esenziwa kwi-Intanethi. Iya kukhokela abahambi ngenkqubo yesicelo ukuze babe nokufumana ii-visa zabo ezikwi-intanethi eziya eCambodia. Abahambi baya kudinga ukufaka ulwazi lwabo lomntu kanye njengoko lubonakala kwipaspoti yabo ukuze yonke into ihambisane.
Dala i-akhawunti. Oku kuvumela abakhenkethi ukuba babuye kwaye bacele enye i-eVisa yaseCambodia ngomhla kamva. Kubahambi abahamba uhambo olongezelelekileyo okanye abo banokufuna ukungena elizweni amatyeli aliqela, le nkonzo iyenza lula le nkqubo.
Hlawula i-visa Oku kufuna ikhadi letyala elisebenzayo okanye iakhawunti nge-UnionPay okanye i-AliPay. I-visa ixabisa i-37 yeedola (i-USD) ngentlawulo eyi- $ 40 yokuhlawula. Intlawulo yesicelo ayibuyiswa ngoko ke iindwendwe kufuneka zijonge ulwazi lazo ukuqinisekisa ukuba zichanekile phambi kokungenisa isicelo.
Lindela iintsuku ezingama-2-4. I-Visa eya eCambodia kufuneka yenziwe Abahambi banokubuyela kwiwebhusayithi kwaye bajonge imeko yesicelo sabo nje ukuba banenombolo yesalathiso yesicelo kunye nedilesi ye-imeyile yeakhawunti yabo.
Shicilela iCambodia eVisa. Abahambi kufuneka beze nekopi eprintiweyo ye-eVisa yabo eyamkelweyo xa befika eCambodia. Ngaphandle koko, ixesha labo lokufuduka linokwandiswa. Kuya kufuneka babonise ipasipoti enye abayisebenzisayo ukufaka isicelo sevisa, nokuba baninzi kunenye.
Ngena eKhambodiya kwaye ube nexesha elimnandi!
Iinyani malunga neVisa ukuya eCambodia
ICambodia eVisa isebenziseka ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintathu ukusuka kumhla wokukhutshwa, ivumela ukuhlala iintsuku ezingama-30 ngeli xesha lelo xesha. Kulungile ukuba ungene endaweni enye, nangona kunjalo, kubahambi abafuna ukuphinda bangene eCambodia kuya kufuneka bathenge enye i-visa ekungeneni nganye.
Iipasipoti kufuneka ukuba zivumeleke kangangesithuba seenyanga ezi-6 ukusuka ngexesha abahambi abangena ngalo elizweni kwaye abahambi baya kufuna ifoto yencwadana yokundwendwela yedijithali ukufaka isicelo se-visa yabo eCambodia.
Ukutyelela eCambodia kulula kunangaphambili ngeCambodia eVisa. Faka isicelo namhlanje kwaye uthathe uhambo lobomi kungekudala!
Ndingayifumana ivisa yokufika eCambodia?
Ewe unga. Nangona kunjalo, kucetyiswa kakhulu ukuba ufake isicelo se-eVisa ngaphambi kokuba ungene eCambodia. Kunokubakho imigca emide kwisikhululo seenqwelomoya xa ufaka isicelo kunye nentlawulo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ube ulungile i-visa yakho ngaphambi kokuba uye eCambodia. Kukwacetyiswa ukuba isicelo se-eVisa singeniswe kwaye sihlawulwe kangangeentsuku ezi-4 ngaphambi kokufika.
Ndinezicwangciso zokuhamba eCambodia kwiinyanga ezimbalwa, ndingasifaka isicelo sam ngoku?
Ewe Unga. Kwimeko apho isicelo sisekude kakhulu ukuba siphinde siqwalaselwe ngokufuduka, iya kubekwa emgceni kwaye idluliselwe ku-Immigration ngaphakathi kwenyanga yomhla wokufika. Nje ukuba ufake isicelo, iya kuthunyelwa i-imeyile echaza inkqubo yomgca.
Ukuba ivisa yam iphelelwe, ndingabe ndihlala eCambodiya?
Ewe. Uvunyelwe ukuba uhlale kangangeentsuku ezingama-30 emva komhla wokungena. Nokuba ivisa lakho liphelile ngelixa ukwiCambodia, uvunyelwe ukuba uhlale de kufike iintsuku ezingama-30.
Ndivela e-United Kingdom, ingaba ndifuna ivisa?
Ewe, abemi baseBritani baya kudinga i-visa yokungena eCambodia. I-Visa ye-elektroniki (i-e-Visa) ye-elektroniki iyafumaneka lula kwinkqubo yesicelo kubemi base-UK. Inkqubo iyafana kubo bonke abantu abafanelekileyo.
Abantwana bam bangaphezulu kweminyaka eli-12 kodwa basahamba besebenzisa ipasipoti yomzali, ngaba basayifuna i-eVisa?
Ewe, bonke abantwana abangaphezulu kweminyaka eli-12 ubudala bayayidinga visa, nokuba bayisebenzisa ipasipoti yabo okanye yeyabazali. Isicelo esahlukileyo siya kufuneka kumntwana ngamnye.
Ifoto yam yokulayisha ecaleni, ingaba ilungile?
Ewe kulungile. Inkqubo yethu ifakwe kwisoftware yokuhlela ifoto. Siza kulungisa iifoto eziza ecaleni okanye ezantsi. Siza kuphinda senze ubungakanani kwakhona nayiphi na imifanekiso engangeni phantsi koorhulumente, kwaye siqwalasele umfanekiso lowo sisikhokelo sesicelo sevisa.
Yeyiphi ifoto yokuzichaza?
Ukufakwa kwifoto yakho ukuze ugcwalise isicelo. Inkqubo yethu yenzelwe ukuqhuba inkqubo yokufaka iifoto. Unokusebenzisa isixhobo sakho esinefowuni ukutsala ifoto yomfanekiso wakho.
Oku kuya kulayishwa emva kwentlawulo.
Akukho ntloko (ngaphandle kwenjongo zonqulo)
Qaphela: Zonke iifomati eziphambili zamkelwe (.pdf .jpeg .jpg .png). Gcina ukhumbula ukuba ifoto kufuneka ibe ngumfanekiso ocacileyo. Kwimeko yomfanekiso olayishwe ecaleni okanye kwicala elingaphantsi, inkqubo yethu iya kuwulungisa umfanekiso.
Leliphi ixesha lokuhlawula kunye neendleko ze-eVisa?
Ixesha lokuqhubekeka: Iintsuku ezi-1 ukuya kwezeshishini.
Indleko: $ 96.00USD (umrhumo wama-36.00 we-eVisa kunye nomrhumo wokuhlawula).
Emva kokuba isicelo singeniswe ngempumelelo, iya kuthunyelwa ku-Immigration ukuze iphinde ihlolwe ukuze yamkelwe. Nje ukuba ivunyelwe i-eVisa, uxwebhu olo luya kuthunyelwa nge-imeyile kwidilesi ye-imeyile ebonelelweyo.
Funda amanqaku ngakumbi ngeCambodia
ECambodiya E-Visa yeFoto ubungakanani
I-Visa yeViero yokufika
IKhambodiya yeVisa yaseKhambodiya
Ukufika kwisikhululo seenqwelomoya sasePhnom Penh
Ukufika kwisikhululo seenqwelomoya i-Mina Reap
ECambodia Visa kwiFomu yesicelo sokufika
I-Cambodia Visa Iimfuneko zeFoto
Ukufika e Cham Yeam (Koh Kong)
IKhambodiya yeVisa yaseCambodia
ECambodia Visa yabemi baseCanada
ECambodia Visa yabemi baseOstreliya
ECambodia Umsebenzi weVisa
IFomu yaseCambodia Visa
Ikhomishini yaseCambodian eMelika
I-Visa yaseCambodia Visa
ECambodia Visa yabemi baseJamani
ICambodia Visa yabemi baseMzantsi Afrika
ICambodia Visa yabemi baseMelika
ECambodia Visa yabemi baseBritane